We.com.mm - သင့်ကို မရင့်ကျက်စေတဲ့ အရာ (၆)ချက်
1. သူတစ်ပါးကို အမြဲတမ်း နှိမ်တယ်
သင်ရော သူများကို ဘယ်နှကြိမ် ဘယ်နှခါ နှိမ်ပြောဖူးလဲ။ ကိုယ်မျက်နှာသာရဖို့အတွက် ကိုယ်မှန်ဖို့အတွက် အများသူငါအရှေ့မှာ တခြားသူတွေကို နှိမ်ပြော အနိုင်ကျင့်ခြင်းဟာ တကယ်တမ်းကျတော့ အကြီးမားဆုံးသော ရူးသွပ်ခြင်းတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူတစ်ပါးကောင်းနေတာကို တိုက်ခိုက်နေတာဟာ မရင့်ကျက်တဲ့ စိတ်ထားပဲဖြစ်ပါတယ်။ သင်လည်း အဲလိုမျိုး တခြားသူတွေအပေါ် အနိုင်ယူနေတုန်းပဲဆိုရင် ခုပဲ ရပ်တန့်လိုက်ပါနော်…။
2. သင့်အမှားအတွက် သူတစ်ပါးကို အပြစ်တင်တယ်။
ရင့်ကျက်ခြင်းဆိုတာ ကိုယ်ရဲ့ အမှန်အမှားကို လက်ခံနိုင်ခြင်းတစ်ခုဆိုလည်းမမှားပါဘူး။ သို့သော် လူတော်တော်များများဟာ ဒါကို လက်မခံတတ်ကြဘူး။ ကိုယ်လုပ်သမျှအရာတိုင်း ဖြစ်မလာဘူးဆိုရင် ဒါဟာ အမှားပဲဆိုတဲ့ အတ္တရှိတတ်ကြတယ်။ များသောအားဖြင့် အဖွဲ့အစည်း၊ အုပ်စုအလိုက် ဆွေးနွေးခြင်း၊ ကျောင်းစာ Assignments လုပ်တဲ့နေရာတွေမှာ စသဖြင့်ပေါ့။ ကိုယ့်ဘက်က နားလည်ထားရမှာက ကိုယ့်အမှားကိုလက်မခံနိုင်တဲ့အပြင် တခြားသူကိုပါ အပြစ်တင်ပြောဆိုခြင်းဟာ မရင့်ကျက်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်။
3. သင့်ကိုသင့် အမြဲတမ်းမှန်တယ်လို့တွေးတောတယ်။
တခါတလေ မှားနေတဲ့အမှန်တွေကို သင်လက်ခံနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ လူတိုင်းအမှားနဲ့ မကင်းတတ်ကြပါ။ အမှားတွေဆီက သင်ခန်းစာကိုယူပြီး အမှန်တွေဖြစ်အောင် နားလည်လက်ခံခြင်းဟာ သင့်ကို ရင့်ကျက်စေနိုင်ပါတယ်။
TV ထဲမှာဖြစ်ဖြစ် MV ထဲမှာဖြစ်ဖြစ် Celes တွေဟာ သူတို့တကယ်လိုအပ်လို့ စိတ်ကောက်ရတဲ့ပုံစံမျိုး ရိုက်ရတဲ့အခန်းတွေ ရှိတတ်ကြတယ်။ ဒါတွေကို အတုယူပြီး သင်မလိုက်နာသင့်ပါ။ အပြင်လောကမှာ အမြဲတမ်း စိတ်ကောက်နေခြင်းဟာ တခါတလေ လူမှုဆက်ဆံရေးမှာ ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင်း သင်ဟာ ကလေးစိတ်မကုန်သေးတဲ့အပြင် ရင့်ကျက်မှုကိုရရှိနိုင်ဖို့ အချိန်လိုပါသေးတယ်ဟု ဆိုလို့ရပါတယ်။
5. အမြဲတမ်း အတင်းပြောတယ်
လူတိုင်းလူတိုင်း ပုံမှန်အားဖြင်း သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ဖြစ်ဖြစ် အပေါင်းအသင်းတွေဆုံလာပြီးဆိုရင် အတင်းတွေ ပြောတတ်ကြပါတယ်။ တန်ဆေးလွန်ဘေး ဆိုတဲ့အတိုင်း အများကြီးပြောခြင်းဟာ သင့်အတွက်မကောင်းသလို ဘေးပတ်ဝန်းကျင်အတွက်လည်းမကောင်းပါ။ အတွေးအခေါ်ပြန်လည်မျှဝေခြင်း နှင့် အတင်းပြောခြင်းဟာ မတူညီကြတဲ့အရာပင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အတင်းပြောခြင်းကို လျော့ချပြီး၊ ဗဟုသုတရစေနိုင်မည့် တွေးခေါ်မှုများကို မျှဝေခြင်းဖြင့် ရင့်ကျက်မှုကို ရယူလိုက်ပါ။
6. မည်သူတစ်ဦးကိုမျှ မလေးစားတတ်ပါ။
လေးစားပါ။ သင်ပြန်ပြီး လေးစားခံရလိမ့်မည်။ သင်သာ လူတွေအပေါ် ရိုးသေလေးစားစွာဖြင့် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနိုင်ခြင်းဟာ သင်သည် ရင့်ကျက်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အပြင် လူကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်သည်ဟု အများက လက်ခံကြပါလိမ့်မည်။ ဘယ်သူက ငါ့ထက်သာတာလဲ ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးအတွက် အချိန်အကုန်မခံပါနှင့်။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ရိုသေခြင်းဖြင့် သင့်ကိုသင် ရင့်ကျက်မှုတန်ဖိုးကို ဖန်တီးရယူလိုက်ပါ။
နေ့တိုင်းလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင် မျက်တောင်တွေကို အချိန်ခဏအတွင်းရှည်လာစေမယ့် နည်းလမ်းကောင်း…
လှပတဲ့ sunshine ပုံလေးတွေရအောင် ဒီလိုပို့စ်လေးတွေပေးပြီးရိုက်ကြည့်ပါ
လေယာဉ်စီးနေတဲ့အချိန် ဘယ်တော့မှ မလုပ်သင့်တဲ့အချက် (၇) ချက်…။